Barcelona oo isha ku heysa magacyada SHAN weeraryahan waaweyn si ay kaga dhigato bedelka Luis Suarez – Gool FM - Idman News
Barcelona oo isha ku heysa magacyada SHAN weeraryahan waaweyn si ay kaga dhigato bedelka Luis Suarez – Gool FM
(Barcelona) 12 Okt 2019. Wargeyska Isbaanishka ee “Mundo Deportivo” ayaa daabacay warbixin lagu soo bandhigay magacyada ay dooneyso kooxda Barcelona inay badal kaga dhigato weeraryahankeeda Luis Suarez.
Suarez ayaa da’adiisa ay sii koreysaa, waxaana suurtogal ah in xilli ciyaareedkan uu yahay kiisa ugu dambeeyay ee garoonka Camp Nou, ama ugu yaraan uusan noqon doonin doorkiisa xilli ciyaareedyada soo socda sidii hore.
Wargeyska ayaa warbixintiisan wuxuu shaaca kaga qaaday inay jiraan magacyada 5 ciyaartoy waaweyn oo u sharaxan inay u dhaqaaqaan garoonka Camp Nou.
Laakiin kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa la fahansan yahay inaysan si fudud kula saxiixan doonin midkoodna, oo magacyada qaarkood howlgalkooda uu ka adkaan doono kuwa kale shaki la’aan, waxaana kaga bixi doona khasnadaha kooxda lacag aad u badan.
Barcelona ayaa sannadihii ugu dambeeyay sare ugu qaadday safkeeda ciyaartoy badan oo waa weyn waxayna ku qarash gareysay lacago aad u badan, taasoo ka dhigeysa in wali dhanka weerarka aysan ku xoojinin heshiisyo waaweyn.
Blaugrana ayaa u jeedsan doonta xagaaga 2020 inay sameyso heshiisyo heer sare ah, xiddiga ay sida weyn u soo dhaweyn doonaan heshiiskiisa taageerayaasha garoonka Camp Nou ayaa ah weeraryahanka PSG ee Kylian Mbappé, iyadoo aan meesha laga saari doonin in Real Madrid ay si weyn u xiiseeneyso adeega xiddigan.
Laakiin Barcelona ayaa sidoo kale yeelan doonta dookhyo kale marka laga soo ago Kylian Mbappé, si ay ula saxiixato, kuwaasoo buuxin kara booska uu ka bixi doono Luis Suarez, waxaana ka mid ah Hare Kane, Roberto Firmino, Marcus Rashford iyo xiddiga kooxda Inter Milan ee Lautaro Martínez.
Sports - Cayaaraha
Ac Milan oo dhigeeda Real Madrid kala heshiisay saxiixa Theo Hernandez & Wax walba oo ku saabsan arintiisa. – Gool FM
Mané oo caawa qarka u saaran in rikoor cajiib ah uu ka soo bar-bareeyo halyeeyga Didier Drogba – Gool FM
West Ham Vs Man City Tartanka: Premier League Wakhtiga: 2:30 duhurnimo Soo …
Previous Previous post: Toos horyaal tv uga Daawo Xaflada Caleemo saarka Madaxweyne Axmed Madoobe oo Jubbaland ka dhacacysa
Next Next post: Munaasabadda caleemo saarka Axmed Madoobe oo Kismaayo ka socota